Ha laga weynaado Aflagaadada
Asalaamu calaykuma wa raxmatullaahi wa barakaatuh.
Inta ka tiba, walaalah ardaaga somalitalk, waxan jeclaystahay in arin baryahanba shabakaddiinna soo labaa noqonayaysay wax ka idhaa.
Waxay ku saabsantahay qoraalada uusoo tebiyo qoraa magaciisa la yidhaa, Maxamad Cabdi Xasan(Diridhaba).In uu qaladaad dhacay xagga taariikhda mar uu ka hadlayay, muran kama jiro. Ujeedada qoraalkayganna ma aha inaan saxo, maxaa yeelay ragbaa hortay saxay, sida ninka la yidhaa Aden Maxamad.
Haddaba ujeedada qoraalkaygani wuxuu daba joogaa ragga u jaawaabay Diridhaba, magac ay adeegsadeen . Aden Maxamad qoraalkiisii hore iyo kan danbebe tiro seddex jeer ayuu adeegsaday magaca (Dirirdhabe), ninnka la yidhaa Maxamad Axmad Maxamuud, isna wuxu adeegsaday isla magaca (Dirirdhabe) shan jeer. qoraagan danbe qoraalkiisa la magac baxay, " Dirirdhabe Rag Hortii ha Caban", ayaya magacyadaa labahdilay ku jiraan.Ninkan ay daba taaganyihiin naanaystiisu waa " Diridhaba" ma aha " Dirirdhabe" , maxaayeelay ka hore waa magac, halka kan danbe ka yahay cay badheedh ah oo fawaaxisha ah.
Bal aan fasiro kan danbe wuxuu ka koobanyahay laba eray oo la isku dhajiyay, waana sidan: Dirir, oo ah roob xiliyada roobbowga da'a, sida dirir cawleed, dirir sakaaro.
Halka erayga: dhabe, yahay cay fawaaxisha la macano ah erayga ingiriisiga ah " fucker". Labada nin ee maqaalada kala qorey, af-aqoon la'aani umay gayn inay eraydaa adeegsadaan, waayo waxa qoraaladooda ku cad sida labaduba ugu talax tageen, aqoon heer sare ahna u leeyihiin af-soomaaliga.
Haddaba walaalayaal, waxaan garan waayi haddii iyagu sidaa u badheedheen inay erayo fawaaxish ka buuxo , wallaooda kale ee Soomaaliyeed soo hor dhigaan, sharaftoodii iyo teennii midna dhawri waayeen, ma waxaad garan waydeen idingu inaa waabisaan, oo xilka idinka saaran wax daabicista gudataan?
Anigu shakhsiyan, waan ka xishooday inaan labadaan nin maqaaal ugu jawaabo, maxaayeelay, nin caytamaya haddaad adna la caytanto, waxba isma dhaantaan, kafadda ay saarayihiinbaan la saarnaan lahaa!
Waxaan jecelahay in nabardaa la dhayo oon la dhayalsan.
Mohamoud Hassan mgabiley@yahoo.ca
» Dirirdhabe Rag Hortii Ha Caban [Mohamed]
» Dirirdhabe Marlabaad aan ku Saxo [Aden]